'गरिब हुनुको पिडा' | Citizen Post News
'गरिब हुनुको पिडा'
रामेछापको एउटा कुनामा जन्मेको म जहा माध्यमिक स्कूल समेत थिएन । टोकरपुर गाँउ आफैमा अति शुन्दर, दुई खोलाले घेरीएको, शैलुङमुनीको त्यो गाँउ, गाँउको शिरानमा जंगल, पुछारमा सुन्दर धान खेतको त्यो हरियाली फाँट, अति सुन्दर र मनोरम निरन्तर सुसाई रहेको दुई खोला । लाग्छ म स्वर्गमा जन्मे, हुर्के ।
कक्षा ७ को परिक्षा पछि माध्यामिक शिक्षाको पढाईको लागि नजिकैको गुन्सीभदौरे गाँउमा अबस्थित माध्यमिक स्कूलमा भर्ना भए, मेरो गाँउबाट खोला, नाला, जंगल हुर्दै सुन्दर फाँटहरुको मनोरम दृश्यको दृश्यस्वादन गर्दै ३ घन्टाको हिडाईपछि पुगिने त्यो गाँउ आफैमा सुन्दर थियो । गाँउको विचमा स्कूल, स्कुल बरीपरी त्यो सल्लाको सुसाई र कलकल बग्ने त्यो धारा, मिजासिला छिमेकीहरु, केही हप्ताको बसाईमा त्यो गाँउले पनि मलाई मोहनी लगाएको थियो ।
म सँग मेरो गाँउकै साथी विष्णु र म प्रत्येक हप्ता गाँउ फर्किने र १ हप्ताको लागि रासन बोकेर होस्टेलमा रमाउथ्यौं । आज ३३ बर्ष भयो, मैले त्यो गाँउबाट छुट्टिएको । आज म सुख र संमृद्धीको खोजमा निस्केको ३३ बर्षपछि एउटा कोठामा थुनिएको छ । म आफुलाई सबभन्दा भाग्यमानी लाग्छ किनकी मसँग एउटा माध्यम बर्गिय व्यक्तिको रुपमा जिवन निर्बाहको लागि चाहिने सबै साधन छन् ।
लकडाउनमा विहानदेखि बेलुकासम्म न्यूज हेर्ने, विश्वमा कति मान्छे मरे, गन्ने अनि आफु बाँच्नको लागि कोठामा रहने मेरो १५ दिनदेखिको दैनिकी भएको छ । जव म समाचारहरु विच विचरण गर्छु, ती नेपालीको चिच्याहाटले कान बन्द गर्न पुग्छु । सम्झिन्छु देशमा अत्यधिक बहुमतको सरकार छ । त्यो पनि कम्युनिष्ट विचार र सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित । दशकौ जंगल, जेलदेखि गाँउगाँउमा यीनै गरिबहरुलाई सपना बाडेर भुमिगत रहेका आदरणिय लौह पुरुषहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि के के पदले शुसोभितहरु चिल्ला कारमा हुँकिएको देख्छु ।
ठूला ठूला समितीहरु बनेको, समितीले ठूला ठूला निर्णयहरु गरेको, अर्बौको सुरक्षा सामाग्रीहरु किनेको, अरबौ रकम कोषमा जम्मा भएको, हजारौं क्वारेन्टाइन अनि आइसोलेसन खडा गरिएको समाचारहरुको झंकार पनि सँग सगै गुन्जिन्छन् । लाग्छ ओहो हामी नेपाली कति भाग्यबानी, कति जिम्मेदार, हामीले जिम्मेदारी दिएका लौह पुरुषहरु, आनन्दले मन तरंङित हुन्छ ।
खै कसले हो गालामा थप्पड हाने र्भैm लाग्छ, म तर्सिन पुग्छु । मत सपनामा पो रहेको रहेछु । ब्युझन्छु, समाचारहरु लाइन लाग्छन् । एक छाक खान, एक आँङ लगाउन अनि ती सुकेनाशे छोराछोरी, श्रीमती अनि कर्मठ बुबाआमा जो एक छाक खान, बाँच्न र बचाउन संघर्ष गरिरहेका एकमात्र साहारा घर कहिले आउला र खाउँला भनेर कुरेर बसेका छन् । हो उनीहरु आफ्नो घर जान पाउन विन्ती गरिरहेका जनताहरुलाई देख्छु ।
हप्तौ भयो रे घर जानको लागि चौरमा सुतेका, अलिकती कमाएर ल्याएको पनि सकियो रे । यस्तै रुवाबासीको चिच्याहट सुन्छु त्यो पनि परदेशमा । घर जाउँ देशका सुरक्षाधारीहरुले बाटो रोकेका छन्, नजाउँ घर गाँउ परिबारको यादले सताएको छ । अरब भन्दा बढि महंगो तिरेर सरकारले समान किन्यो रे, धनीमानीहरुले सबै समानहरुको भाउँ सगरमाथा छुने बनाए रे, प्रधानमन्त्री ज्यूले सम्बोधन गर्नु भयो रे । भन्नु भयो रे यस्तो अभावको बेलामा जसले जे गरेनी पछि सोचौला यस्ता समाचारले फेरी मलाई रिगाटा लाग्यो । एक छिन लामो सास फेरेर सुस्ताए ।
लाग्यो शिद्धान्त छाड्न र इमान्दार राजनितिज्ञ हुन अति गारो हुदो रहेछ । फेरी लामो सास फेरे, गमे, के ति गरिब हुनु उनीहरुको अपराध थियो र ? के गरिबी राजनितीक मुद्धा मात्र हो ? तिनै गरिब हुन यिनका भोट बैक, यही गरिब हुन तिनीहरुका ईश्वर, जसले आज चिल्लाकार र भव्य महलको रस्वासदन गराएका छन् । फेरी सोचे, के ति सिमानामा अनागरिक भएका गरिबको पिडामाथि यो राज्य किन यति कठोर भएको होला ?
यिनको के गल्ती थियो होला ? यिनकै रेमिटेन्सले देश चलेको भनेर कुर्लेको पनि नसुनेको होइन् । साच्चै नै यी १÷२ हजार नेपालीलाई राज्यले जिम्मा लिन नसक्ने नै हो त ? धेरै सोचे, त्यस्तो लागेन मलाई । यी १÷२ हजार नेपालीलार्ई राज्यले जिम्मा लिएर पालनपोषण गर्न राज्यलाई कति पनि गाहे छैन् । मात्र ति राज्यका ढुकुटी चलाउने मस्यीहाहरुले चाहाना राख्नु पर्छ । किन चाहादैनन् ? किनकी ती गरिब हुन् । ती विचरा हुन् । खै, मैले भेउ पाउन सकिन् ।
फेरी अर्को समाचारले मलाई मुर्छित बनायो । एक छिन पछि मुर्छाबाट व्युतिए, अनि लामो सास फेरे । समाचार थियो, हाम्रा सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूले अष्ट्रिेलियामा रहेका नागरिकप्रति धेरै चासो देखाएनु भएको छ रे । अति राम्रो कुरा प्रसंशनिय सोचाई । जुन देशका अफ्ना नागरिकहरु विचल्लीमा परेनि सोच्नु पर्छ राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
अन्तमाः लामो सास फेरे र भन्न मन लाग्यो कि अति गरिब हुदाँ राज्यका प्रमुखहरुले चासो देखाउनु नहुने हो र ? सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यू, आदरणिय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले भने जस्तै जनताको ज्यान जोगानु प्रथमिकता हो भने जति पैसा लागोस ति अनागरिक भएर छटपटाई रहेका विचारा गरिबहरुलाई उद्धार गर्नुस् । र ति पचासौ हजार राख्न सक्ने क्वारेन्टाइनहरुमा ति चौरमा सुतेकाहरुलाई राख्नुहोस्, बाँकी कुरा हिसाव गरौंला ।
तपाईको जय गाउनेछन् विचारा ति गरिबहरुले !
मनोज कुमार कँडेल, भक्तपुर
अधिबत्ता⁄बरिष्ठ बाल अधिकारकर्मी